Shaqo la'aanta oo sii kordhaysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shaqo la'aanta oo sii kordhaysa
La daabacay tisdag 17 april 2012 kl 09.29
Waxaa soo yaraaday shaqooyinka banaan ee ay hayso laanta shaqada Arbetsförmedlingen. Foto: Bertil Ericson/Scanpix.
Dhamaadkii bishii mars waxaa shaqo la'aan ahaa 396 000 oo qof amaba boqolkii 8,5 dadyowga howl karkaa. Taas oo ka micno ah in dadyowga shaqo la.aantaa ay ku darsantay 8 000 oo qof.
Mucaaradka xisbiyada cagaarka iyo gaduudka ayaa shalay doodii barlamaanka ka socotay ku dhalaceeyey arintaas. Xisbiga Sooshiyaaldemokratiga ayaa ka dalbaday dowladda in ay ka jawaabaan sidey u xalinayaan shaqo la'aanta. Xoghaya dhaqaalaha ee xisbiga Magdalena Andersson oo habaynimadii xalay ayada iyo wasirrka dhaqaalha Anders Borg doodi ku dhex martay barnaamijka wararka Aktuellt ee ka baxa taleefgishinka SVT ayey ku celisay dalabkaas ah in ay dowladda keento xalka looga hortagayo shaqa la'aanta.
- Markuu Anders Borg qabtay xilka wasiirka dhaqaalaha lix sanno ka hor shaqo la'aantu waxay ahayd boqolkii 6,5. Taas oo uu ku tilmaamey shaqo la'aan baahday. Maantay oo ay shaqo la'aantu marayso boqolkii 8 oo ayna sii kordhayso, su'aasha habooni waxay tahay maxuu Anders Borg ugo wacayaa shaqo la'aantaas, maxuuse xal ah oo u hayaa si shaqo la'aant loo dhimo? Ayey waydiisay Magdalena Andersson.
Anders Borg ayaa asna dhankiisa sheegay in ay dowladdo ay samaysay waxyaabo badan si loola dagaalamo shaqo la'aanta oo ayna soo wadaan farsamooyin badan marka ay soo dhamaato ka baaraan degida miisaaniyada xagaagaan soo socda, lakiin ma uusan qeexin farsada uu sheegay waxa ay noqon karto.
- Waxaan hoos u dhigaynaa sharuudaha, waxaan adkeynaynaa sidii ay dadyow badan ku heli lahaayeen shaqo, waxaan adkeynaynaa quwada hamiyadeedd ee dadyowga shaqo doonka ah, waxaan hagaajineynaa aqoonta. Arimaas ayaan siweyn uga shaqaynaynaa inta laga gaarayo xagaaga. Waxaan il gooniya u yeelanaynaa caydha inta gu,gaan lagu jiro, waxaan sidoo kale soo bandhignay dib u eegid lagu sameeyo canshuuraha shirkadahu bixiyaan iyo wax yaabo kaloo badan oo ka mid noqon doona miisaaniyada xagaaga, ayuu yeri Anders Borg.
Magdalena Andersson ayaa ayadu sheegtay in xisbigeedo uu ku talinayo in Sweden si wanaagsan u qaybiso lacagta si loola dagaalamo shaqo la'aanta haysata dhalinyarta oo maantay gaaraysa boqolkii 25. Waxayna sidoo kale dhaleecaysay qarashaadka ay dowladdu ka jartay khidmadaha ay bixiyaan shaqo bixiyaashu kuwooda shaqaaleeya dhalinyar, taas oo ay ku tilmaantay talaabo qaali ah oo aan loo baahnayn.
- Anders Borg waxuu wasiirka dhaqaalaha ahaa mudo lix sanno ah. Waxuu geliyeey 50 bilyoon dib u habayntaan oo ay dadka asaga la taliyaa ku tilmaamen in aysan waxqabad buuxa soo kordhin. Hay'ado madax banaan sida xisaabiyaha guud iyo quboro dhaqaale ayaa arintaan dhaleeceeyey oo tilmaamey in aysan lahayn waxqabad buuxa. Aniga waxaan gelin lahaa lacagtaan dadaalo wax ku ool u ah dhalinyarta ay dhibka ku tahay in ay suuqa shaqada soo galaan, ayey tiri Magdalena Andersson.
Magdalena ayaan faahfaahin waxa ay ka wado dadaalka ay sheegtay. Anders Borg asna waxa uu sheegay in uu ku qanac sanyahay in shaqo la'aanta Sweden ka jirtaa ay aad uga hoosayso mid ka jirtaa wadamada iskutagay ee Eu. Waxa uuna ka digay in ay Sweden dib ugo noqoto nidaamkii hore ee ku dhisnaa kaalmo siinta.
- Qadka shaqada ee aynu hir gelinay si fiican boo u meelmaray. Waxaynu sifiican uga badbaadnay hoos u dhicii dhaqaalaha marka loo barbardhigo dalalka kale, shaqaalaytuna aad bay uga badantahay sidii ay ahayd dhoor sanno ka hor. Lakiin mida i welwel gelinaysa waxay tahay damaca Magdalena ee ah in ay ku kordhiso sharuudaha dhalinta suuqa shaqada u socota. Waxay rabtaa in ay afar jibaarto kidmada shaqo bixiyaasha, waxay rabtaa in ay meesha ka saarto canshuur dhimistii loo sameeyey maqaayadaha, waxayna rabtaa in ay dib u soo celiso nidaamkii ku dhisnaa kaalmada iyo in ay dib u nidaamiso suuqa shaqada, intaasi waxay keenaysaa sharuudo adag iyo shaqo la'aanta oo sii baahda ayuu yeri wasiirka dhaqaalaha Anders Borg.